Ndị na-emepụta JACKET - China JACKET Supp & Factory
MenS 3 na 1 mmiri ozuzo jaket Custom OEM n'èzí uwe waterproof jaket
Enwere ike idozi ụgbọ elu jaketị 3-in-1 iji kwalite nchebe na nkasi obi. Ọ nwere ike ịnagide ihu igwe siri ike, dịka oke mmiri ozuzo, mmiri ozuzo ma ọ bụ snow. Ugba ala, snowboarding, ugwu ugwu, njem njem, njem, egwuregwu ndi ozo a na-eme n’oge oyi na oge di iche iche.
Chọpụta kacha mma Mens jaket na Best ere ákwà.
Iji nye nchebe na vasatail mkpuchi, anyị 100% jaket owu bụ ihe a ga-enwerịrị na oge opupu ihe ubi gị na oge mgbụsị akwụkwọ. Buttondị bọtịnụ-ụdị bọtịnụ ndị ọzọ nwere atụmatụ nchebe dị elu, na mkpuchi mkpuchi a na-adịghị ahụ anya na ọtụtụ akpa. Jaketị a nwere ụdị nke anyị na oge anyị ahaziri
Omenala nke jaketị jaket dị elu na-ewu ewu
Anyị bụ ụlọ ọrụ ọkachamara nke nwere sistemụ arụmọrụ zuru oke yana ndị nrụpụta ọrụ ọkachamara. Jaketị nke ụmụ nwanyị m bụ ndị a ma ama na esenidụt ma nabata ụdị ma ọ bụ ụdị ejiji dị iche iche. Jaketị anyị na-adọkpụpụta bụ mkpuchi ikuku na-enweghị mmiri, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla
Mmụ mko akwa nwere akwa mkpuchi iji mee ka ọ dị ọkụ ma sie ike
Uwe elu nke igwe ihe bu uda di elu nke gha eme ka i juo oyi n’oge udiri n’enweghi obi ojoo. Uwe a na-ewe mmiri dị mfe iji kpuchie ma na-eji ihe mkpuchi akpịrị na-eme ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị nọ n'èzí. Uwe a dị mfe iji chekwaa ya, yabụ enwere ike ịkwadebe gị mgbe ọ na-aga.
Jaketị ndị na-agba ọkụ na-akwado ịzụrụ buru ibu
Jaketị a Fleece dabara adaba iji mee ka ị kpoo ọkụ mgbe ikuku dị jụụ. N'oge oyi, ị nwere ike iyi uwe ọzọ iji kpoo gị ọkụ. Anyị ga-enye gị ọnụahịa kacha mma maka ịzụrụ nnukwu ọnụọgụ
High Quality Omenala Men SoftshellJacket N'èzí
Igwe mkpuchi shei a kpuchiri ekpuchi bụ jaket na-ekpo ọkụ ma na-agbanwe agbanwe nke na-eme ka nkasi obi na arụmọrụ dị elu. Ọkpụkpụ ahụ, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi DWR na-enye ifufe na mmiri na-eguzogide mmiri, ebe akwa ahụ na-agbanwe agbanwe ma na-ekwupụta ya ma enwere ike iburu gị. Ọ dị mma maka egwuregwu, mana obere oghere, yabụ mgbe ihu igwe dị njọ, ị nwere ike ịtọ ya.
N'èzí Mens windproof jaket ọkachamara elu àgwà
Ọbụna mgbe ị chere na oyi akwa dị mma, mgbe ụfọdụ, ifufe nwere ike ime ya ezigbo oyi. Ma ị nọ n’elu ugwu nke ikuku na-efegharị na mba ahụ, ma ọ bụ na-esi nkịta na-apụ apụ n’ụlọ, anyị nwere ike irite uru site na akwa igwe mgbochi, nke na-enyere anyị aka ịdị ọcha na nkụ. Anyị na-enye ọtụtụ ọnụọgụ windo ndị nwoke kachasị ọhụrụ na jaket ndị ezubere iji kpochigide na ikpo ọkụ ma mee ka ikuku ghara ịdị ike.
Ski jaket ọkachamara elu mma windproof na a pụrụ ịdabere na ya
Ejiri jaketị mịịị emere uwe maka gburugburu oke ma a kpara ya nke ọma site na akwa gbatara juputara na ihe dị nro. Ha nwere okpu a kpara akpa, aka ogologo nke nwere akwa na-agbanwe n'ime ya, akwa zipa n'okpuru ogwe aka, uwe mwepu na-ewepu iwe, akpa enyo na akwa mgbochi mmiri na akpa abụọ edozi. Ọrụ teknụzụ nwere oke nnwere onwe ijegharị dịka ikpere aka